Andro: 23 mey 2020
Ny mpandraharaha Tiorka dia mividy ny tsenany amin'ny tsenam-barotra vahiny sy an-trano amin'ny ezaka mafy, asa, fandraisana sy fampiasam-bola maharitra. Birao fifaninanana, orinasa 2016'da 107 tiorka ataon'ny orinasa vahiny [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nilaza fa ny sisintanin'ny vavahady sy ny fameperana napetraka ao anatin'ny faritry ny fipoahana karazana coronavirus vaovao dia misy fiantraikany ara-piarahamonina maro. Amin'izay fotoana izay ny otrikaretina ho governemanta [More ...]
Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu: Hanomboka amin'ny andro faharoa amin'ny Ramadany ny varotra fiaran-dalamby. Na izany aza, ny tapakila fiaran-dalamby dia misy indrindra amin'ny alàlan'ny rindranasa finday sy tranokala na tapakila tsy misy ifandraisana. [More ...]
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia mitohy ny asfitrefitra 7/24 ao anaty làlana tsy voalaza fa anisan'ireo miady amin'ny fihanaky ny koronavirus. Ny sampan-draharahan'ny siansa momba ny siansa, izay nanao 16 19 taonina ny fanaovana asfalt amin'ny 23 May. [More ...]
Tonga tany amin'ny sehatra farany ny Xperia Hotels mba hitady vola any Erciyes. Ben'ny tanàna Metropolitan Dr. Memduh Büyükkılıç dia nanambara fa ny hotely, izay nahatratra ny dingana nahafaty olona, ​​dia hanana farafara 550 fandriana. Ben'ny tanàna Metropolitan Dr. Mamdouh [More ...]
Ny kaominin'i Kocaeli Metropolitan dia hanome fitaterana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena tsy andoavambola afa-tsy amin'ny 52 - 07.00, 09.00 - 17.00 miaraka amin'ny zotra bus bus 19.00. Asabotsy 23,25 Mey sy 26 [More ...]
Iza no efa nitantana TCDD General Management hatramin'ny nananganana azy? 1923 km ny lalamby 1960 3.578 km namboarina teo anelanelan'ny 3.208-1940 no vita hatramin'ny 22. Tamin'ity vanim-potoana ity, nifandray tamin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny [More ...]
Ali İhsan Uygun, teraka tamin'ny Ordu tamin'ny 12 aprily 1966, nahazo mari-pahaizana tao amin'ny sampan-draharahan'ny eletronika elektronika sy Elektronika tao Istanbul tamin'ny taona 1987. Tamin'ny taona 1988, University of Istanbul Faculty of Administration Business Business Economics [More ...]
Ny rafi-pitaterana fanamafisam-bidy faha-enina (DBDS) novolavolain'i HAVELSAN tao anatin'ny ambaratongan'ny Tetikasa Zavaboary New Type (YTDP) dia nivoaka avy tao amin'ny tsipika famokarana ary niditra tao amin'ny tsipika fitsapana. Teo anelanelan'ny orinasa alemana TKMS sy Dirte indostrian'ny fiarovana (SSB) [More ...]
Raha mikasika ny serivisy fitaterana birao kosa, afaka milaza isika fa vondrona vondrona fitaterana no nanova izany ho sehatra iray tamin'ny alàlan'ny fanomezana ity serivisy ity. Ny malaza izay tontosa miaraka amin'ny fanamafisana ny serivisy fitaterana an-trano dia efa miasa ankehitriny. [More ...]
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Dr. Ismail Demir, STM Defense Technologies Engineering and Trade AŞ think tank nokarakarain'ny fihaonan'ny horonantsary STM Think Tech, "Kovid-19 any Tiorkia sy Process ary Beyond [More ...]
Ny World Tourism Organisation (UNWTO) an'ny Firenena Mikambana dia namoaka ny "barometer" May 2019, izay ahitana angon-drakitra 2020. Raha i Torkia dia nampiantrano ny firenena faha-6 be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao ary ny roa amin'ny vola miditra amin'ny fizahantany [More ...]
Na izany aza ny fampielezan-kevitra Tiorka hanohanana anay dia mahatratra 2 Billion TL
Ny minisitry ny fianakaviana, ny asa ary ny asa sosialy Zehra Emerald Selcuk, ny vanim-potoanan'ny tazomoka 19 taona hanohanana ny olom-pirenena sahirana notarihin'ny praiminisitra Recep Tayyip Erdogan tamin'ny 30 martsa, "Ampy anay izahay Turkey" [More ...]
Minisitra Selçuk: olona 402 an'arivony no nanelanelana anay
Mitohy amin'ny famoahana ny filàn'ny olom-pirenena marobe amin'ny alàlan'ny Ministeran'ny Fianakaviana, ny Asa ary ny asa sosialy, ny Fiarovana ara-tsosialy ary ny İŞKUR. Miaraka amin'ireo tetikasa napetraky ny minisitera, mba hahafahan'ny olom-pirenena manana fahasembanana mifikitra mafy kokoa amin'ny fiainana. [More ...]
Malalaka ve i Başkentray sy Marmaray?
Mandoa vola daholo ny olom-pirenena Başkentray sy Marmaray amin'ny fahatongavan'ny fialan-tsasatra? nanomboka nanadihady izy. Mandritra ny Ramadany, hisy ny sidina Baskentray sy Marmaray. Manomboka amin'ny 23:2020 amin'ny asabotsy 00.00 Mey XNUMX (zoma) [More ...]
Ny paikady momba ny fampiasam-bola mivantana any Tiorkia dia manomana
Ministra Mustafa Varank, minisitry ny indostria sy teknolojia, ny filoha dia nanambara fa hiaraka amin'ny tetikasan'ny tetik'asa fampiasam-bolan'ny Foreign Investment Investment an'ny Torkia izay vita tsy ho ela izy ireo. Hoy i Varank, "Te hanohy haingana miaraka amin'ny valiny sy ny paikady mifototra amin'ny fiantraikany aho." teny [More ...]
Mandeha foana ve ny tetezana amin'ny fahatongavan'ny andro firavoravoana? Moa ve ny tetezana sy làlana-lalamby afaka malalaka amin'ny fialantsasatra? nanomboka nanadihady izy. Amin'ny Ramadany dia malalaka ny lalambe sy ny tetezana. Ho an'ny famindrana hatramin'ny Alarobia 27 Mey 07.00:XNUMX [More ...]
Na dia misy curfew manerana ny firenena mandritra ny Eid al-Fitr aza, ny fanaraha-maso hentitra dia ho tanteraka amin'ny làlana. Mandritra ny fetin'ny Ramadany dia 18 564 ireo mpitatitra olona no hiasa avy amin'ny polisy sy ny zandarimaria isan'andro, raha toa kosa ny polisy sy [More ...]
Ao amin'ny faribolana nalefan'ny Ministeran'ny Atitany ho an'ny Governemanta Vohitra miisa 81, karazana coronavirus vaovao (Covid- 19) ao anatin'ny faritry ny fiparitahan'ny fepetra noraisin'ny Dirteur du Relijioire ara-pinoana mba hisorohana ny fiparitahana ao Tiorkia; Ny 16 martsa 2020 [More ...]
Nandritra ny famerana ny curfew 4 andro nataon'ny Kaominin'i İnegöl, mitohy ny asa fanavaozana ao amin'ny Çardak Mosque Intersection, izay tena vita tamin'ny asa fanavotana izay efa vita 7/24. Any amin'ny faritra izay ampiharina ny rafitra fanamafisam-pahefana [More ...]
Noho ny valanaretina coronavirus dia nivoaka ny regZBAN momba ny curfew izay ho ampiharina amin'ny 23, 24, 25 ary 26 Mey. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny ora fiasa İZBAN dia ho toy izao manaraka izao:
Iza moa Kamuran Yazıcı?
Kamuran Yazıcı, teraka tao Trabzon tamin'ny 1967, nahazo diplaom-paron'ny Karadeniz Technical University, Faculty of Engineering and Architecture, Departemantan'ny asa-tanana sivily tamin'ny taona 1988. Nahavita ny mari-pahaizana Master's tao amin'ny Institute of Science tamin'ny 1991 tany amin'ny oniversite ihany izy. Master [More ...]
Andro faha-4 famerana ny 'fampiharana ny fandriam-pahalemana ao Turkey "dia vita
Ny talen'ny tale jeneraly an'ny minisiteran'ny atitany, ny komandin'ny jeneraly Gendarmerie sy ny mpiambina ny morontsiraka avy amin'ny lafivalon'ny firenena dia niara-niasa tamin'ny 08.00-24.00 ora ny fandaharana "Turkey Confidence Peace". Eo amin'ny fampiharana, Eid al-Fitr [More ...]
İsa Apaydın Iza moa?
Injeniera metallurgical, tompon'andraikitra amin'ny fanjakana, TCDD General Manager. Teraka tany Ankara izy tamin'ny 1965. Nahazo diplaoma tamin'ny sampana teknikan'ny teknikam-pitsinam-bolakolak'i Istanbul tamin'ny 1987 izy. Nahavita ny mari-pahaizana tato amin'ny departemantan'ny Metallurgical Engineering Sakarya tamin'ny 1996 izy. [More ...]